आरुबोटे नरसंहार-४ : सवा घन्टामै यसरी गरियो ९ जनाको हत्या ढोका तोडफोडबिनै कसरी भयो हत्याराको 'इन्ट्री'?
नारायण अधिकारी बुधबार, जेठ २२, २०७६, १७:३५
आरुबोटे (पाँचथर)– गत जेठ ६ गते रातिको घटनाले पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका-३, आरुबोटका बासिन्दा अझै पनि राम्ररी निदाउन सकेका छैनन्। आरुबोटेका बमबहादुर फियाक र धनराज शेर्मा (ससुरा-ज्वाइँ) का परिवारका ९ जनाको हत्यामा बमबहादुरकै ज्वाइँ मानबहादुर माखिमको हात रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
उक्त नृशंस हत्याकाण्डमा मानबहादुर कसरी यतिसम्म क्रूर बन्न सके होलान्? घटना उत्पन्न गराउन सक्ने कारक केके थिए? प्रहरीले अनुसन्धान सकिसकेको छैन। उक्त घटनाको यथार्थ बुझ्न नेपाल लाइभ टिम पनि घटनास्थल आरुबोटे नै पुगेको थियो। हामीले उक्त घटनासँग जोडिएका पारिवारिक सम्बन्ध, आर्थिक लेनदेन, सामाजिक कारणसमेत खोतलेका छौं। मानबहादुरको व्यवहार, मनोदशा र विगतबारे पनि तथ्यहरु जुटाएका छौं। जसलाई शृंखलाबद्ध रुपमा प्रस्तुत गर्ने नै छौं।
अघिल्लो शृंखलामा घटना भएको दिन मानबहादुरको गतिविधि र भिनाजुसँग भएको अस्वाभाविक कुराकानीका बारेमा लेखेका थियौं। यो चौथो शृंखलामा लगभग सवा घन्टाको अवधिका मानबहादुरले कसरी छप्काए ९ जनालाई? घटनापछि मानबहादुर कता लागे? यिनै विषय समेटेका छौं।
जेठ ६ गते राति १०:३० बजेसम्म आरुबोटे सामान्य अवस्थामा हुन्छ। धनराजको घरमा पुगेर झारफुक सकेर धामीहरु साढे १० बजे त्यहाँबाट निस्कन्छन्। तर, केहीबेरमै आएको हावाहुरीसहित ठूलो पानी पर्न थाल्छ। धामी हर्कमान र उनका साथी सुरेशमान नजिकैको देउमान तामाङको घरमा छिर्छन्।
जब बिहान उठेर उनीहरु पाइला चाल्छन् तब मात्रै उनीहरुले थाहा पाउँछन्- धनराज र बमबहादुरको परिवार सखाप भो रे!
जब धनराजको घरबाट झारफुक गर्ने धामीहरु साढे १० बजे निस्किए। के त्यसपछि नै धनराजको परिवारमाथि आक्रमण भयो?
तर, त्यति छिट्टै यो घटना सुरु भएको प्रहरीले विश्लेषण गरेको छैन। खास कुन समयमा भयो यति ठूलो नरसंहार? हामीले पाँचथरका डिएसपी नरेन्द्र कुँवरलाई सोध्यौं।
डिएसपी नरेन्द्र कुँवर
'धामीहरु निस्कनेबित्तिकै परिवारका सदस्यहरु निदाइसकेका हुँदैनन्। ननिदाएको अवस्थामा एकै परिवारका सबै सदस्यको हत्या गर्न असम्भव जस्तै छ। जसकारण करिब ११ बजेबाट हत्या सुरु भएको देखिन्छ।'
सो रात ९ बजे धनराजको घर वरपर मानबहादुरको उपस्थिति देखिएको प्रहरीले पत्ता लगाइसकेको थियो।
'स्ट्रोङ, कम स्ट्रोङ गर्दै सबैभन्दा कम टावर टिप्नेसम्म गरी एउटा मोबाइल टावरका ६ वटासम्म लेयर हुन्छन्, 'हत्या अनुसन्धानलाई सूक्ष्म ढंगले केलाइरहेका डिएसपी कुवँरले प्रष्ट पार्न खोज्दै भने, 'धनराजकी श्रीमतीको मोबाइल पनि स्ट्रोङ टावरले क्याच भएको र मानबहादुरको पनि सोही ठाउँको टावरबाट स्ट्रोङ क्याच भएकाले उनी धनराजकै घर वरपर भएको पुष्टि हुन्छ।'
त्यसो त मानबहादुरले साढे ९ बजे एक व्यक्तिलाई सोही ठाउँबाट कल गरेका थिए। त्यसपछि उनको मोबाइल कनेक्सन कतै देखिन्न। यात मोबाइल अफ गरे, या फ्लाइट मोडमा राखे।
धनराजको घर सामान्य छ। ढुंगा माटोको गारो र जस्ताको छानो। घरको पश्चिमतर्फ तीन ढोका छन्। बीच ढोकाबाट भित्र पस्नेबित्तिकै उनीहरु सुतेको ठाउँमा पुगिन्छ।
आश्चर्य त ढोका तोडफोडबिना नै हत्यारा भित्र पस्छ। ढोका बिग्रिएको, चुक्कुल तोडफोड गरेको देखिँदैन।
कसरी प्रवेश गर्‍यो होला हत्यारा?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेलले दुई वटा विश्लेषण गरे। पहिलो– धामीहरु त्यस घरबाट बाहिरिएको केहीबरेमै हावाहुरीसहित पानी परेको थियो। हत्याराले ढोका ढकढक्याउँदा धामीहरु फर्किएर पो आए कि भनेर भित्रबाटै खोलिदिएको हुनुपर्छ।
दोस्रो– त्यस दिन अबेर रक्सी खाएर सुतेकाले ढोका नै लगाउन बिर्सिएको पनि हुन सक्छ।
एकै कोठामा ५ शव
धनराजको परिवारका सबैको शव एउटै कोठामा थिए। धनराज, उनकी श्रीमती जस्मिता र दाइकी छोरी इच्छाको शव भुइँमा लडिरहेको थियो। दुई छोरीहरु युहाना र मुनाको शव भने खाटमाथि ओछ्यानमा।
धनराजका छोरीहरु युहाना र मुनाको शव। उनीहरु दुवै सिसाकाण्डमा बिरामी भएका थिए
बिहान प्रहरी घटनास्थल पुग्दा रगतसमेत सुकेर कालोकालो भइसकेको थियो। धनराजको शव उत्तानो अवस्थामा र श्रीमती जस्मिताको घोप्टो अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो। निलो कट्टु र सतो गन्जी लगाएर सुतेका धनराजको दाहिने तिघ्रामा दुई ठाउँमा आधा छिन्ने गरी धारिलो हतियार प्रहार भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो। उनको अनुहारमा पनि गहिरो चोट थियो। हत्याराले धनराजको लिंगमा समेत प्रहार गरेका थिए। श्रीमती जस्मिताको दुवै हात छिन्न केही अंश मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा भेटिएको थियो।
'हात काट्दा जस्मिताले नाडीमा लगाएको बालासमेत काटिएको थियो,' अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी निरीक्षक पौडेलले सुनाए।
प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेल
जस्मिता र धनराजसँगै उनका दाइकी छोरी इच्छाको शव पनि भुइँमै थियो। भुइँको ओछ्यानमै तीन जनाको शव लडेकाले उनीहरु उठ्न नपाउँदै हत्या गरिएको प्रहरीको विश्लेषण छ।
निलो, सेतो र रातो कलर मिसिएको छिर्केमिर्के सुरुवाल, माथि कालो र पातलो ज्याकेट लगाएको टाउकोमा मात्रै चोट भएको अवस्थामा धनराजकै एक छोरीको शव भेटिएको थियो। सुन्तला कलरको सुरुवाल र माथि सेतो टिसर्ट लगाएको अवस्थामा टाउकोमा चोट लागेको अर्की छोरीको शव थियो। खाटमा उत्तानै अवस्थामा भेटिएकाले उनीहरु पनि उठ्न नपाउँदै हत्याराले छप्काएको विश्लेषण प्रहरीको छ।
ओछ्यान रगतले लछप्पै भिजेको। मुडा, ग्लास, चप्पल, हातमा लगाउने पञ्जा, थाल शव वरपर छरिएका। प्रहरी घटनास्थल पुग्दा यही दृश्य थियो। धनराजको घरको ढोकामा लागेका रगतका टाटाहरु अझै प्रष्ट देखिन्छन्। प्रहरीका अनुसार दुई घरमै घटना गराउँदा हत्याराले जुत्ताचप्पल लाएका थिएनन्।
हातखुट्टा धोएर हत्यारा बमबहादुरको घरमा
पहिले धनराजको परिवारलाई सिध्याएर हत्यारा उनका ससुरा बमबहादुरको घरतिर लागेको प्रहरी निष्कर्ष छ।
धनराजको घरको उत्तरतर्फको आँगनको डिलमा पानी थाप्ने गरेका ३/४ वटा कालो ड्रम राखिएका थिए। धनराजको घरबाट काम फत्ते गरेर निस्किएको हत्याराले तिनै ड्रममा राखिएको पानीमा हातखुट्टा धोएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी निरीक्षक पौडेल बताउँछन्। ड्रम र भुइँमा समेत रगतका केही टाटा भेटिएपछि प्रहरीले यो निष्कर्ष निकालेको हो।
हत्या गरिसकेपछि बमबहादुरको घर जाने बाटोतर्फ २०/२५ मिटर टाढासम्म रगतका टाटाहरु फेला परेको थियो। हत्या भइसकेपछि भोलिपल्ट संघीय प्रहरी कार्यालय धरानबाट एसएसपी शरद खत्रीको टोली कुकुरसहित घटनास्थल पुगेको थियो। त्यसबेला कुकुरले समेत हत्यारा बमबहादुरको घरतर्फ भएको 'लोकेट' गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
सिरानीको खुकुरीले बमबहादुरलाई जोगाएन
धनराजका परिवारका सबैको हत्या भएपछि दक्षिण-पश्चिममा रहेको (१० मिनेट पैदल दुरी) बमबहादुर फियाकको घरतर्फ हत्यारा अघि बढ्छ। बमबहादुरको घर भएको टोललाई फियाक टोल भनेर पनि चिनिन्छ। ढुंगा-माटोको गारो र जस्ताको छानो। सानो एकतले घर। मुल ढोकाअगाडि सानो बरण्डा। बरण्डाको पूर्वी भागलाई जस्ताले बारेर एउटा खाट राखिएको। बमबहादुर यही खाटमा सुत्थे।
यहीँ सुत्थे बमबहादुर
उनको सिरानमा उध्याएर राखिएको धारिलो खुकुरी कहिल्यै छुट्दैन थियो। 'बुवाको लास खाटमा अडेस लागेर ठडिएको अवस्थामा थियो,' बमबहादुरकी साइँली छोरी बुद्धमाया खजुम भन्छिन्, 'बुबा सधैं खुकुरी सिरानमा राखेर सुत्थे। त्यसदिन पनि सिरानै खुकुरी थियो। दाप चाहिँ उ: त्यहाँ झुन्ड्याउनुहुन्थ्यो। हेरिसक्नु थिएन। बाबुको त आँखै थिएन।'
सुरक्षाका लागि बमबहादुरले सिरानमा राखेको त्यो धारिलो खुकुरीले उनलाई बचाउन सकेन। खुकुरीबाटै उनको ज्यान गयो।
ढोकाबाहिरको खाटमा एक्लै सुतेकाले हत्याराले सुरुमा बमबहादुरलाई नै निसाना बनाएको प्रहरीको विश्लेषण छ।
आफू सत्ने खाटमुनि बमबहादुरले ट्वाइलेट बनाउन भनेर ल्याइएको बालुवा राखेका थिए। उक्त बालुवा छरिने भयो भन्दै बोरामा बालुवा भरेर उनले वरपर घेरेका थिए। त्यही बोरा र आफू सुत्ने खाटमा अडेस लागेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको थियो। हत्याराले बमबहादुरको टाउको र अनुहारभरि प्रहार गरेका थिए। दौरा-सुरुवाल लगाएका मानबहादुरको ढाकाटोपी पनि भुइँमा खसेको थियो। जेठा ज्वाइँ रणबहादुर लिम्बू बमबहादुरको हातको औंला पनि भोलिपल्ट सोही ठाउँमा भेटेको बताउँछन्।
मनकुमारीको खुट्टामा चप्पल
बमबहादुर बाहिर मारिए भने उनकै घरभित्र श्रीमती पुर्सिमाया, कान्छी छोरी मनकुमारी र नातिनी श्रेयाको हत्या भयो। उनीहरु घरभित्र भुइँतलामा सुत्थे।
मानबहादुरकी पत्नी मनकुमारीको शव भने मुलढोकाको ठिक भित्रपट्टि फेला परेको थियो। अन्य दुई जनाको शव ओछ्यानमा।
तर, अच्चमको कुरा मनकुमारीले खुट्टामा भने चप्पल थियो। बमबहादुरको घरमा पनि ढोका तोडफोड भएको थिएन।
मुलढोकामै ढलेकी मानबहादुरकी पत्नी मनकुमारी। जसको खुट्टमा चप्पल देख्न सकिन्छ
यसबारे हामीले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी निरीक्षक पौडेललाई सोध्यौं।
'बाहिर बमबहादुरको हत्या गर्दै गरेका बेला भित्र रहेकी मनकुमारीले थाहा पाएको हुनुपर्छ। बाहिर आवाज आएपछि के भयो भनेर मनकुमारी चप्पल नै लगाएर ढोका खोल्न आएकी थिइन् कि। त्यही बेला हत्याराले मनकुमारीलाई मारेर भित्र प्रवेश गरेको हुन सक्ने हाम्रो विश्लेष्ण छ,' प्रहरी निरीक्षक पौडेलले भने, 'मनकुमारीको लास ढोकामै हुनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ।'
ढोका तोडफोड नगरी हत्यारा भित्र प्रवेश गर्नु र मनकुमारीको खुट्टामा चप्पल हुनुले पनि उनी बाहिरको आवाज सुनेर के भयो भन्दै ढोका खोल्न आइपुगेको हुन सक्ने प्रहरीको विश्लेषण हो।
करिब ११ बजेबाट हत्या गर्न थालेको हत्याराले सवा १२ बजेको अवधिमा ९ जनाको हत्या गरिसकेको प्रहरी अनुमान छ।
टाउकोमा प्रहार गरिएको छ भने टाटेपाटे सुरुवाल र रातो पातलो स्विटर लगाएर सुतेकी मनकुमारीको पेटमा निसाना बनाई धारिलो हतियार रोपिन्छ। उता धनराजको लिंग, उनकी श्रीमतीको हातमा बढी प्रहार भएको छ।
मानबहादुरले साढुदाइको लिंगलाई र पत्नी मनकुमारीको पेटलाई नै टार्गेट बनाएर किन खुकुरी प्रहार गरे? यसको केही संकेत हुन सक्छ? यसको अपत्यारिलो कारणबारे हामीले खोतलेका छौं। बाँकी अर्को शृंखलामा।